တရုတ်၊ ပူပြင်းသည့်အရည်ကော်၊ လျှပ်စစ်သံ၊ ကော်သေနတ်၊ လေပူ၊ ပလတ်စတစ်ဂဟေ၊ သံဖြူစက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Boda
တိကျသောချိုးဖောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် hot melt ကော်သေနတ်သည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏လိုအပ်ချက်များ၊ ထူးခြားသော filter ဒီဇိုင်း၊ သန့်ရှင်းရေးအတွက်အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်အခြားလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပူအရည်ပျော်ကော်သေနတ်သည်၎င်းကို ၃၀၀ at တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသောအခါပုံပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်စက်အရည်၊ အီလက်ထရောနစ်စက်ရုံနှင့်အစားအစာစက်ရုံ၊ ထုပ်ပိုးစက်ရုံစသည့်စက်ရုံများတွင်ပူပြင်းသောအရည်ပျော်ကော်သည်စက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပြီးအလိုအလျောက်မှုတ်ဆေးသေနတ်များ၏ချို့ယွင်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သေနတ်ကိုယ်ထည်၏အခွံကိုလုပ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ၃၀၀ with ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်တွင်ကြာရှည်စွာပုံသဏ္ensureာန်မဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ။ သေနတ်၏ကိုယ်ထည်သည်ပေါ့ပါးပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထူးခြားသောအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာဒီဇိုင်းသည်အော်ပရေတာကိုအလုပ်ချိန်တွင်ပေါ့ပေါ့ဆဆမလုပ်မိအောင်တားဆီးနိုင်သည်။ ဥရောပအဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုသည်လွယ်ကူစွာနှင့်တာရှည်ခံစေသည်။ အဆိုပါ screw နှစ်ခု, ချွတ်, အစက်အပြောက်နှင့်မြူဖိုင်ဘာကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
လျှပ်စစ်ဂဟေသံသည်လျှပ်စစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် Du အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝါယာကြိုးဂဟေဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဂဟေအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဂဟေဆက်များ၏မျက်နှာပြင်ကိုအပူချိန်တစ်ခုသို့အပူပေးပြီးဂဟေဆက်ရန်အရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်သည်။ သတ္တုဂဟေဆော်မှုကိုနားလည်စေရန်သတ္တုပျံ့နှံ့မှုသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြီးဆက်သွယ်မှုအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဂဟေဆော်သည့်အခါပုံ ၁-၂၀ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလျှပ်စစ်ဂဟေသံကိုလက်ျာလက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ဒြပ်စင်သို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးကိုလက်ဝဲလက်ဖြင့်နှာစောင်းသို့မဟုတ်ဖိညှပ်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီလျှပ်စစ်သံကိုအပြည့်အဝအပူပေးသင့်သည်။ အချို့သောဂဟေဆော်သည့်အရာများကိုဂဟေသံခေါင်း၏အစွန်းတွင်သယ်ဆောင်သင့်သည်။ ဂဟေသံ၏အစွန်းကိုဂဟေဆက်စက်နှင့်နီးကပ်စွာထားပါ။ လျှပ်စစ်သံသည်အလျားလိုက်လေယာဉ်သို့ ၆၀ ဒီဂရီခန့်ရှိသည်။ သံဖြူမှအရည်သို့သံဖြူစီးဆင်းစေရန်လွယ်ကူစေရန်။ ဂဟေဆော်သည့်ပူးတွဲတွင်ဂဟေ ဦး စီးနေသည့်အချိန်ကို ၂-၃ စက္ကန့်အတွင်းထိန်းချုပ်သင့်သည်။ ဂဟေသံခေါင်းကိုချီ။ လက်ဝဲဘက်သည်ဒြပ်စင်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ဂဟေဆော်အဆက်အသွယ်ရှိသံဖြူအအေးခံပြီးနောက်ဘယ်ဘက်လက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ခဲဝါယာကြိုးကိုဖွင့်ရန် pinzee ကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည်ချောင်မနေကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါကမလိုအပ်သောခဲဝါယာကြိုးများကိုဘေးဘက်ခုတ်နှင့်ဖြတ်နိုင်သည်။
ရေစိုခံအမြှေးပါး၊ ပိုက်လိုင်း၊ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ဘမ်ပါ၊ အားကစားကြမ်းပြင်၊ ပုလဲဝါဂွမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြံဥာဏ်၊ ပလပ်စတစ်ပိုက်၊ PP / PE / PVC ပြားများတွင်ကြော်ငြာခြင်း နှင့်ဒေသခံ geomembrane ၏အမြှေးပါးဖွဲ့စည်းပုံဂဟေနှင့်ပြုပြင်။
အားသွင်းခြင်းအတွက်ပျက်စီးနေသော power supply သို့မဟုတ် power line ကိုအသုံးပြုခြင်းအားတားမြစ်သည်။ ၎င်းကိုအစွန်းရောက်သောအခြေအနေများတွင်ဖြစ်စေ၊ အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်စေ (ပူပြင်းသည့်နေရောင် (သို့) ပူပြင်းသောကားများတွင်) အသုံးပြုရန်ကိုတားမြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အပျက်သဘောဝင်ရိုးစွန်းများကိုပြန်ပြောင်းရန်တားမြစ်ထားသည်။ ကော်ကိုသေနတ်၊ ခေါက်၊ ကျော်နင်းခြင်းနှင့်လှိမ့်ချခြင်းကိုတားမြစ်သည်၊ သတ္တုနိုင်ငံခြားပစ္စည်းများအားအားသွင်းဆိပ်ကမ်းသို့ထည့်သွင်းခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရန်အတွက်ပြင်ပဘက်ထရီကိုအသုံးပြုခြင်းအားတားမြစ်သည်။ ဘက်ထရီပြုတ်ပြီးနောက်၎င်းကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။ စုစုပေါင်းကုသမှု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်များရှိသည့်ကလေးများ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှုသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားမှုများမခံရပါက၎င်းကိရိယာကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မကစားရန်ကလေးများကိုကြီးကြပ်ပါ။ အကယ်၍ ဤစက်၏ပါဝါကြိုးပျက်စီးလျှင်၊ ၎င်းကိုအထူးကိရိယာနှင့် / သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှသာအစားထိုးရမည်။
1 use ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုအသုံးမပြုခင်သေချာဖတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤလက်စွဲကိုအနာဂတ်အတွက်အသုံးပြုရန်သိမ်းထားပါ။
၁။ ကော်သေနတ်နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသူများသို့မဟုတ်ဤလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုမသိသူများအားကော်ပီဖြင့်လည်ပတ်စေပါ။
(၂) အသက် (၈) နှစ်အောက်ကလေးများအားအသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။ ဤချောင်းသည်ရှစ်နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်မရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အကယ်၍ သင်တုတ်ကိုမျိုပါကအသက်ရှူကျပ်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။
၃။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတနည်းပါးသောကလေးများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအားကော်ပီများအသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။ အသက်ရှစ်နှစ်ကျော်ကလေးများနှင့်ကာယ၊ အာရုံခံစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤကော်ပီကိုသူတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူကကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူကအသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားခြင်းခံရပါကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကော်သေနတ်နှင့်လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ညွှန်ကြားချက်နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ။
၄။ ကလေးများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းမရှိဘဲဆေးကြောသန့်စင်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။
အသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီမတိုင်မီကော်သေနတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကော်သေနတ်နှင့်အားသွင်းလိုင်းပျက်စီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုအသုံးမပြုရ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကော်သေတ္တာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မဖွင့်ပါနဲ့။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပညာရှင်များသာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်မူရင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်သည်။
၇။ nozzle နှင့် silicone sleeve များကိုမထိပါနှင့်။
၈။ ကော်ကော်အားပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပညာရှင်များသာမူလအပိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ဤနည်းဖြင့်သာကုန်ပစ္စည်း၏လုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေနိုင်သည်။
၉။ ရေ၌စိုစွတ်သောအခါ၊ ကော်ကော်အသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။
2 charg အားသွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများ
၁။ အသုံးပြုမှုကိုအားမသွင်းပါနှင့်၊ အပူဘက်ထရီများကိုမအားသွင်းပါနှင့်။
၂။ မီးလောင်လွယ်သောစားပွဲ (စက္ကူ၊ ထည်၊ အထည်စသည်ဖြင့်) သို့မဟုတ်မီးလောင်လွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အားသွင်းရန်ခွင့်မပြုပါ။
၁၊ ကော်သေနတ်များသည်စက္ကူ၊ စက္ကူ၊ စက္ကူ၊ ဖော့၊ သစ်၊ သားရေ၊ အထည်၊ အမြှုပ်၊ ပလတ်စတစ်၊ ကြွေထည်၊ ကြွေထည်၊
၃။ ဒီဂျစ်တယ်နှင့်အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီရှိသောအရာဝတ္ထုများအတွက်မသင့်တော်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ switch ခလုတ်ကိုပြန်ဆွဲယူပါ၊ အပြာရောင်မီးဖွင့်နေလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ switch ခလုတ်ကိုရှေ့သို့ဆွဲပြီး switch သည်ပိတ်ထားသည်။
၃။ အကယ်၍ အပြာရောင်မီးပိတ်ထားလျှင်၎င်းကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအားသွင်းသင့်သည်။ အားဖြည့်နေစဉ်မီးနီသည်မီးဖွင့်နေသည်။
၅။ အသုံးပြုပြီးသောအခါပိတ်ထားသောကော်သေတ္တာကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။ ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီအအေးခံပါ။ အပူသေနတ် nozzle သည်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
၆။ လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအားကော်နှင့်နှာခေါင်းမှကာကွယ်ပါ။ အရေပြားနှင့်ထိတွေ့သောကော်သည်မိနစ်အနည်းငယ်မျှရေအေးဖြင့်ချက်ချင်းဆေးပါ။ အရေပြားမှပူကော်ကိုဖယ်ရှားရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
၇။ အချင်း ၆.၈-၇.၂ မီလီမီတာရှိသောအပူချိန်နိမ့်ကော်ကော် (၁၀၀ မှ ၁၅၀ between အကြားအရည်ပျော်သောအပူချိန်) ကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်။
၉။ အရည်၊ အစိုဓာတ်နှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့်ကော်အစိတ်အပိုင်းများသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကျနိုင်သည်။
5、 Bonding ပြင်ဆင်မှု
၁။ ကပ်လျက်တည်နေရာသည်သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့။ အမဲဆီကင်းရမည်။
3. နမူနာပစ္စည်းအနေဖြင့်အပူပစ္စည်းများ၏သက်ဆိုင်မှုကို ဦး ဆုံးစစ်ဆေးပါ။
4. ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိမည့် workpiece ၏အပူချိန်5℃ - 50 are ဖြစ်ကြသည်။
1. ရော်ဘာတုတ်ကိုနို့တိုက်ကျွေးသော groove ထဲသို့ထည့်ပါ။
2. ကော်ကော်ကိုဖွင့်ပြီးအသုံးမပြုခင်စက္ကန့် ၁၈၀ လောက်အပူပေးပါ။
(၄) ပူပြင်းသောအရည်ပျော်ကော်အားအသုံးပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၁၀ မှ ၃၀ စက္ကန့်အတွင်းကပ်ထားသောအရာများကိုညှစ်ပါ။ bonding အနေအထားကိုလည်းတညျ့နိုင်ပါတယ်။
6. bonding အနေအထားခြယ်သို့မဟုတ်အရောင်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အအေးခံပြီးနောက်ကျန်ရှိသောကော်ကိုတုံးတူရိယာဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။ လိုအပ်ပါကအပူပေးခြင်းဖြင့် bonding အနေအထားကိုထပ်မံလျှော့ချပါ။
၂။ အသုံးပြုပြီးပါကပိတ်ထားသောကော်သေတ္တာကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။ ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီအအေးခံပါ။ အပူသေနတ် nozzle သည်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
၃။ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောအရည်ပျော်ပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ အဝတ်ပေါ်ရှိအပူအရည်ပျော်ကော်ကြွေကျန်များကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
(၄) အသက် ၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များလက်လှမ်းမမီနိုင်သောခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်အအေးခံ။ သိုလှောင်ထားပါ။
ကော်ချောင်းကိုကျွေးရန်ခက်ခဲသည်။ ကော်ကော်သည်အပြည့်အဝအပူမပေးပါ။ စက္ကန့် ၁၈၀ အတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အပူ
ပူပြင်းသောအရည်သည်ကော်သေနတ်သို့နောက်သို့စီးဆင်း။ ကော်တုတ်၏အချင်းသည်အလွန်သေးငယ်သည်။ အကြံပြုထားသောမူရင်းကော်ကော်ကိုသုံးပါ
ကော်၏အဆုံးမှာ, ကော်သေနတ်ကိုင်သည့်အနေအထားကနေဖယ်ရှားသောအခါ, "နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ" ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ ကော်၏အဆုံးမှာကော်နေဆဲထွက်လာမယ့်နေသည်။ gelatinization ရဲ့အဆုံးမှာကော် output ကို Adjust ။
nozzle မှပူသောအရည်ပျော်ကော်ကိုသုတ်ပါ။ ကော်ပြီးတဲ့အခါမှာ nozzle ကို workpiece နဲ့သန့်ရှင်းပါ
ရှေ့သို့ Chain၊ lifting chain၊ သွပ်သွင်းခြင်းသံကြိုး၊ သံမဏိကွင်းဆက်၊ အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များ
နောက်တစ်ခု: ဂျက်၊ အလျားလိုက်အပေါက်၊ ဒေါင်လိုက်ပေါက်၊ ဂျက်၊
ကော် Stick Gun